USA တွင်မောင်းထုတ်ရန်မည်သို့ | အသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့အမောင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် | USAHello
America မှာကားမောင်းစတင်ရန်, သငျသညျလုံခြုံစွာမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်သင်ကိုအမေရိကန်ဥပဒေများအမောင်းကိုသိဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးစမ်းသပ်ရှောက်သွားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရမယ်. သငျသညျမောင်းနှင်မှုအပေါ်စီစဉ်ထားပါလျှင်တိုင်းပြည်နယ်တစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရဖို့သင်သည်လိုအပ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်ပြောင်းရွှေ့လိုလျှင်, သင်သည်ထိုပြည်နယ်အတွင်းရှိသစ်တစ်ခုလိုင်စင်အဘို့သင့်ဟောင်းလိုင်စင်ဖလှယ်ရမယ်. ဤတွင်အမေရိကန်မောင်းထုတ်ရန်မည်သို့သိရန်အချို့သောအရေးကြီးသောအရာဖြစ်ကြ၏.
တစ်ဦးမောင်းလိုင်စင်မရှိဘဲမောင်းနှင်နိုင်ဖို့တရားမဝင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. US မှာတစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်ကွဲပြားခြားနားသောမောင်းနှင်မှုဥပဒေများရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးအမေရိကန်ဖတ်နေဤဥပဒေများကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် ကားမောင်းသူရဲ့လက်စွဲစာအုပ် ဘာသာစကားမြားစှာ. သင်တို့သည်လည်းအမှန်တကယ်ဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းရဲ့လက်စွဲ.
သင်ဖတ်ခြင်းနှင့်ဥပဒေများနားလည်သဘောပေါက်ပါပြီပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏လိုင်စင်ရဖို့ရေးသားထားသောစမ်းသပ်မှုနှင့်တစ်ဦးမောင်းနှင်စမ်းသပ်မှုနှစ်မျိုးလုံးကိုယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအချိန်ကဒီစမ်းသပ်မှုရှေ့ဆက်အချိန်စာရင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်ကအွန်လိုင်းသွားသို့မဟုတ်သွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ် DMV ရုံး သင့်အိမ်ကအနီးဆုံးဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုယူနှင့်သင့်လိုင်စင်ရရှိရန်အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်. ပြည်နယ်အများစုသင်သည်သင်၏မိခင်ဘာသာစကားအတွက်စမ်းသပ်မှုယူခွင့်ပြု.
မတော်တဆမှုသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်မော်တော်ကားအာမခံအဖုံးများကုန်ကျစရိတ်. ပညတ္တိကျမ်းအမှု၌ယာဉ်မောင်းဒဏ်ရာရတစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကားများပေါ်တွင်အခြေခံအာမခံလိုအပ်ပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းပဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကားမှအပျက်အစီး၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အာမခံရနိုင်, နှင့်ကားခိုးမှုများအတွက်.
သငျသညျတရားဝင်မောင်းနိုင်ရန်အတွက်အနည်းဆုံးအခြေခံကားတစ်စီးအာမခံမှာရှိရမည်. သငျသညျမိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ကားကိုမောင်းနှင်နေကြသည်ရင်တောင်, သင်ကားမောင်းနေသောကားတစ်စီးအာမခံထားကြောင်းသေချာစေရန်သင်၏တာဝန်. သငျသညျရဲကရပ်တန့်ပါကအဆိုပါအာမခံစာရွက်စာတမ်းပြသနိုင်ရန်ကားထဲတွင်ထားရှိမည်ရပါမည်.
ကားတစ်စီးမှတ်ပုံတင်ရေးပြည်နယ်မှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေးဆောင်နေတဲ့အခွန်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်လမ်းမပေါ်တွင်ကားကိုယူခွင့်ပြုနှင့်သင့်လိုင်စင်ပြားများအတွက်ချေ. ဒါဟာမှတ်ပုံမတင်တဲ့ကားကိုမောင်းဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး. သငျသညျရဲကရပ်တန့်ပါကအဆိုပါမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းပြသနိုင်ရန်ကားထဲတွင်ထားရှိမည်ရပါမည်.
သငျသညျကားမောင်းနေစဉ်အဆိုပါယူအက်စ်အေသငျသညျကိုကာကွယ်ရန်ဥပဒေများရှိပါတယ်. သင်အမြဲကဤဥပဒေများကိုလိုက်နာရမည်. ဤဥပဒေများသင့်အိမ်နိုင်ငံတွင်ထက်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ပြည်နယ်များအတွက်တိကျသောဥပဒေများသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဤတွင်အများဆုံးပြည်နယ်လိုအပ်အချို့အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများဖြစ်ကြသည်:
မွေးကင်းစနှင့်ကလေးငယ်များကားထဲတွင်လုံလုံခြုံခြုံခါးဖြစ်ကြောင်းသူတို့၏အရွယ်အစားကားထိုင်ခုံသင့်လျော်သောစီးရမယ်. ကလေးများကားထိုင်ခုံကို အသုံးပြု. ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်အသက်ပြည်နယ်အားဖြင့်ကွဲပြား. သငျသညျမသေချာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ဒေသခံ DMV ရုံးကိုဆက်သွယ်. ကားမောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်စီးနေချိန်မှာသင့်ရဲ့ရင်ခွင်အတွက်ကလေးတစ်ဦးကိုင်ထားဘယ်တော့မှမ; ဒါကြောင့်အန္တရာယ်များနှင့်တရားမဝင်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်.
အမေရိကန်တစ်ဦးကားထဲတွင်ကားတစ်စီးသို့မဟုတ်စီးနင်းကားမောင်းနေစဉ်သင်တစ်ဦးနဲ့ခါးပတ်ဝတ်ရမယ်. ယာဉ်အတွက်လူတိုင်းတစ်ဦးနဲ့ခါးပတ်ဝတ်ရမယ်, ခရီးသည်တင်အဖြစ်မောင်းနှင်သို့မဟုတ်စီးနင်းရှိမရှိ. အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကြောင့်, တစ်ဦးလေယာဉ်ပျက်ကျမှုအတွက်, ခါးပတ်မှာမပါဘဲလူတို့သည်မိမိတို့ထိုင်ခုံထဲကပျံသန်းနိုင်, သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အခြားသူများဒဏ်ရာရ.
သင်တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသို့မဟုတ်ကားမောင်းနေတယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်. နီးပါး USA တွင်တိုင်းပြည်နယ်ခမောက်ဝတ်ဆင်ရန်ဆိုငျကယျသမားလိုအပ်ပါတယ်.
သငျသညျမောင်းနှင်မှုမတိုင်မီသို့မဟုတ်နေချိန်မှာအရက်မသောက်ရမှခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. သငျသညျကိုမသောက်နှင့်မောင်းနှင့်ကြီးမားသောဒဏ်ငွေပေးဆောင်ဒါမှမဟုတ်ပင်ထောင်ဒဏ်အချိန်အစေခံရန်လိုအပ်လျှင်သင်သည်သင်၏လိုင်စင်ဆုံးရှုံးနိုငျသောကွောငျ့ဤသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်. သငျသညျကိုမသောက်နှင့် drive ကိုပါလျှင်သင်တို့သည်လည်းအလေးအနက်ထားတစ်စုံတစ်ဦးထိခိုက်သို့မဟုတ်သတ်ပစ်နိုင်.
သငျသညျ US မှာအချို့သောပြည်နယ်များအတွက်ကားမောင်းနေစဉ်ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာစကားပြောမှတရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်. ဖုန်းနဲ့စာပို့အားလုံးနီးပါးပြည်နယ်များအတွက်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်. ဆဲလ်ဖုန်းလမ်းကနေသင်တို့ကိုအာရုံနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျကိုကျော်ဆွဲသင့်တယ်. အမေရိကန်မြို့ကြီးများတစ်ဦးကကြီးထွားလာအရေအတွက်ကကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားအာရုံပြံ့လှငျ့တားမြစ်ထားကြသည်, ထိုကဲ့သို့သောစားအဖြစ်, အရက်သောက်ကော်ဖီ, သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှမတက်ရောက်.
သင်ကားထဲတွင်မဟုတ်အခါသင်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကားထဲတွင်သင်၏သားသမီးစွန့်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးစတိုးဆိုင်သို့သွားလျှင်, သငျသညျသငျနှငျ့အတူသင်တို့၏သားသမီးဆောင်ခဲ့ရမည်. ကလေးများတယောက်တည်းကျန်ရစ်သောနေတယ်ဆိုရင်, သူတို့အထဲကရဖို့ကြိုးစားနေဒဏ်ရာရနိုင်, ဘရိတ်သို့မဟုတ် clutch လွှတ်ပေးရန်, overheat သို့မဟုတ်အေးခဲ, သငျသညျအထဲက lock, သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားပါ.
သင်ပင်ပန်းလျှင်မောင်းမနေပါနဲ့. သင်သည်သင်၏ကားထဲတွင်ဖြစ်ကြပြီးနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့လျှင်သင်သည်မောင်းထုတ်ရန်လည်းပင်ပန်းများမှာ, သငျသညျအသွားအလာ obstructing ကြသည်မဟုတ်, သင်အန္တရာယ်မဟုတ်ဘယ်မှာလုံခြုံတည်နေရာအချက်ပြမှုနှင့်ကျော်ဆွဲထုတ်. အဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့တွင်သတ်မှတ်ထားသောကြွင်းသောအရာဒေသများရှိပါတယ်. အမြဲတမ်းသင်နေစဉ်အတွင်းသင်၏တံခါးတို့ကို lock မောအိပ်.
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိမဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့ဦးချိုကိုသုံးပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ. အချို့သောဒေသများရှိ, မလိုအပ်ဘဲသို့မဟုတ်အချို့သောနာရီအတွင်းဦးချိုသုံးစွဲဖို့တရားမဝင်ထိုသို့. အသံကျယ်ရေဒီယိုများအသုံးပြုမှုအချို့သောဒေသများရှိလည်းစိတ်ဓာတ်ကျသို့မဟုတ်တရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်.
မော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့်မော်တော်ယာဉ်ခိုးယူမှုနှင့်ခိုးမှုအချို့သောဒေသများရှိပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင့်ကားတံခါးများကိုသော့ခတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, ပင်သင့်ကားရှိနေစဉ်, သငျတို့သထားခဲ့ပါရသောအခါ, သင်၏သော့ကိုယူ. မြင်ကွင်းကနေအဖိုးတန် Remove.
F ကို°ရာသီဥတုပုံမှန်အားဖြင့် 70 အထက်အလွန်ပူပြင်းသို့မဟုတ်အလွန်ချမ်းအေးသည်ဆိုပါကသို့မဟုတ် 40 ° F ကိုအောကျတှငျ, ပင်ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်နှင့်အတူကားထဲတွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစွန့်ခွာဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးက, သူတို့သေဆုံးနိုင်သောကြောင့်,. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကားတစ်စီး၏ယာဉ်မောင်းထွက်သော့ခတ်ဖို့လူသိများပြီ, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲသင်တို့အပေါ်မှာအဓိကစောင့်ရှောက်.
သငျသညျမတော်တဆမှုအတွက်ရလိုလျှင်သင်သည်ကားမောင်းနေစဉ်, သငျသညျကိုရပ်တန့်ထားရမည်. ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲမတော်တဆထိခိုက်မှု၏မြင်ကွင်းတစ်ခုစွန့်ခွာမနေပါနဲ့. သင့်ကားနေဆဲအလုပ်လုပ်လျှင်, လမ်းပိတ်ထားဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစား. မည်သူမဆိုကိုထိခိုက်စေပါက, သငျသညျကိုပဌနာသင့်တယ် 911 ချက်ချင်း.
အဘယ်သူမျှမထိခိုက်စေလျှင်, သငျသညျနာမတျောကိုချရေးသင့်တယ်, ဖုန်းနံပါတ်, လိပ်စာ, ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အရေအတွက်က, လိုင်စင်ပန်းကန်အရေအတွက်ကို, သငျသညျ hit သို့မဟုတ်သင်ထိမှန်သူနှင့်အာမခံသတင်းအချက်အလက်. မျက်မြင်သူတွေကိုရှိခဲ့ပါလျှင် (လွှ) မတော်တဆ, သင်သည်လည်း၎င်းတို့၏အမည်များနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုစုဆောင်းသင့်တယ်. သင်တစ်ဦးကကင်မရာရှိပါက, သင်သည်မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဓါတ်ပုံတွေကိုယူနိုင်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်းမတော်တဆမှု၏တည်နေရာချရေးနှင့်ကောင်းစွာအဖြစ်တည်နေရာဓါတ်ပုံတွေကိုယူသင့်ပါတယ်.
သငျသညျ US မှာအခြေချနေကြဘယ်မှာပေါ် မူတည်., ရာသီဥတုသင့်အိမ်တိုင်းပြည်ကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်. ဒါဟာအစွန်းရောက်အခြေအနေများအတွက်ကားမောင်းသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ.
လမ်းရေခဲသို့မဟုတ်နှင်းဖုံးသည်ဆိုပါက, သငျသညျမောင်းနှင်မှုကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်. သငျသညျကိုမောင်းရပါမည်ဆိုပါက, ဖြည်းဖြည်းသွားပါနှင့်သင့်တာယာပေါ်နှင်းကျတာယာသို့မဟုတ်ချည်နှောင်ကိုသုံးပါ. သူတို့ကသငျသညျရေခဲသို့မဟုတ်ဆီးနှင်းအတွက်ပိုကောင်းရပ်တန့်ကိုကူညီနိုင်.
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပစ္စည်းများပါဝင်သောသင့်ကားအတွက်အရေးပေါ်ကိရိယာအစုံထုပ်ပိုး, ထိုကဲ့သို့သောပထမဦးဆုံးအကူအညီကိရိယာအစုံအဖြစ်, အပိုနွေးအဝတ်အစား, ရေ, သံကြိုး, တစ်ဦးဆီးနှင်းဂေါ်ပြား, ကာလက်နှိပ်ဓာတ်မီး.
လမ်းမကြီးဒေါသသူတို့ကားမောင်းလာသောအခါအမျက်ဒေါသကလူခံစားရတယ်ဖော်ပြရန်တစ်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်. သူတို့သည်သင်၏မောင်းနှင်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဆိုးကြပါလျှင်ပြည်သူ့သင်တို့ဆီသို့ပိတ်ဖို့ရန်ကြီးတွေသို့မဟုတ်အသံဆူဆူညံညံသို့မဟုတ်ကားမောင်းစေခြင်းငှါ. သင်ကားမောင်းသည့်အခါသင်တစ်ဦးအမှားလုပ်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့လျှင်, သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသည်လူတစ်ဦးကိုပြသရန်ချီလွှဲနိုင်ပါတယ်. တစ်စုံတစ်ဦးကလမ်းဒေါသရှိပြီးသငျသညျမှာအမျက်ထွက်သည်ဆိုပါက, တုံ့ပွနျကွပါဘူး. နည်းတူအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာတတ်နိုင်သမျှကားမောင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လမ်းထဲကရရန်ကြိုးစား. ဒေါသထွက်နေတဲ့ဒရိုင်ဘာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မနေပါနဲ့, သငျသညျအမျက်ထွက်သောသို့မဟုတ်စိတ်ဆိုးအခါနှင့်မောင်းကြဘူး. ယာဉ်မောင်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သည်းခံခြင်းတွေအများကြီးကြာ.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အမေရိကန်ကားတစ်စီးဝယ်ယူ? ကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူလေးနက်ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါသည်. ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဦးအမေရိကန်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ဆရာအကူအညီနဲ့သင်ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရှိသည်အကြံပြု. သငျသညျတခါတရံကားဝယ်ယူရန်ဘဏ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ပြည်ထောင်စုထံမှချေးငွေရနိုင်. သင်တို့မူကားတစ်ဦးချေးငွေရရှိရန်လျှင်, ကားကိုသငျသညျငွေသားနှင့်အတူကဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လျှင်ထက်ပိုမိုကုန်ကျမည်ဒါကြောင့်သင်လစဉ်လတိုင်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုပေးဆောင်စေမည်.
သင်သည်သင်၏ကားကိုပေးချေသို့မဟုတ်လုံးဝသင့်ရဲ့ချေးငွေပယ်ပေးဆောင်ကြရတဲ့အခါ, သင်ရလိမ့်မယ် “ခေါင်းစဥ်” သင့်ကားမှ - တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းသင်ပိုင်ဆိုင်သက်သေပြ.
ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ကားသစ်ထက်ကိုသုံးကားတစ်စီးဝယ်ဖို့စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်ပါသည်. သင့်အနေဖြင့်ပိုင်ရှင်ထံမှသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးကုန်သည်ကနေအသုံးပြုတဲ့ကားဝယ်နိုင်. သင်စျေးနှုန်းအပေါ်ညှိနှိုင်းရန်နိုင်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးကိုသုံးကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူနေတယ်ဆိုရင်, သင်တို့သည်အလျှင်းမကားကိုမှားကြောင်းသေချာစေရန်ဝယ်ရှေ့မှာကားမှာစက်ပြင်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်. သင်တို့သည်လည်းကားကိုမောင်းကိုစမ်းသပ်ချင်ကြလိမ့်မည်. ဒါဟာသင်ကဝယ်ခင်သင်တစ်ဦး drive ကိုအဘို့အယူနဲ့သေချာအရာအားလုံးအလုပ်လုပ်စေရန်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်.
သင်တစ်ဦးကိုသုံးကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျသေချာကားစေရန်လိုအပ်ပါတယ် “ခေါင်းစဥ်” (အရာသည်သင်တို့ထံကကဝယ်ယူနေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပြသ) ရှင်းပါတယ်. သငျသညျကားခေါင်းစဉ် notarized ရသင့်တယ် (တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့) နှင့်သင်တစ်ဦးလက်ခံရရှိ get သေချာအောင်, ဒါကြောင့်လက်ကျမ်းစာ၌ရေးထားဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင်, ကားပိုင်ရှင်ကနေ.
ဤရွေ့ကားသငျသညျပိုကောင်း USA တွင်ကားမောင်းနားလည်ကူညီရန်အားလုံးရုံအကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်. ဤအချက်အလက်များ၏အဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ရည်ရွယ်. မောင်းနှင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမဆိုမေးခွန်းများညွှန်ကြားရပါမည် ပြည်နယ် DMV ရုံးမြား သို့မဟုတ်ဒေသခံရဲ.